श्रेणी चिकित्सा 0
12>> श्रेणी चिकित्सा
धेरै छ - आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण वर्ष
तपाईं शायद आफ्नो जीवन मा ध्यान द्वारा अन्तिम, सम्झना छैन वर्ष हो भन्ने याद, तर घटनापूर्ण पटक, पनि कडा सबै यो एक एकल पात्रो वर्ष भित्र फिट सक्ने विश्वास गर्न भनी उहाँ सम्झनुहुन्छ, त्यहाँ छन्। यस्ता तीव्र वर्ष - यो आफ्नो भाग्य मा महत्त्वपूर्ण चोटियों छ, धेरै छ आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण वर्ष अग्रिम गणना, वा retroactively तिनीहरूलाई पाउन अनुमति दिन्छ। तपाईं बस यस्तो वर्ष भोगिरहेको भने, तपाईं स्वास्थ्य, मूड विशेष गरी ध्यान दिएर हुनुपर्छ, र भाग्य को पाठ के हेर्न छ के को intricacies मा delving। महत्वपूर्ण वर्ष Calculate जीवन र Numerology मा पहिलो महत्त्वपूर्ण मिति जन्म आफ्नो मिति हो। त्यसैले आफ्नो जीवनको अविस्मरणीय वर्ष गणना गर्न पहिलो तरिका - जीवनको तरिका को एक नम्बर प्रयोग गर्न छ । उदाहरण: जन्म मिति सबै संख्या थप्नुहोस्: 1987.
खींच को हालतमा
खींच उपलब्ध शरीर complexes को धेरै सिर्जना, धेरै महिलाहरु एक bikini मा समुद्र तट मा उपस्थिति जोगिन, र केही पति नै गर्न पनि लज्जित छन्। यो समस्या को सफाया गर्न सकिन्छ किनभने तर नैराश्यको, तथापि, यो पर्याप्त बलियो छ मा खर्च छैन। आज beauticians तान्नु निशान हटाउन वा कम से कम तिनीहरूलाई कम सजिलै देखिने बनाउन प्रक्रियाहरु को एक किसिम प्रदान। तर पनि हामी यस लेखमा छलफल जो सबै, उपलब्ध तान्नु निशान लागि धेरै प्रभावकारी जनता उपचार, त्यहाँ छन्। आमा संग उपाय तान्नु निशान Mummies - व्यापक भएको छ, जो परम्परागत चिकित्सा, को ज्ञात दबाइ कारण यसको अद्वितीय गुण छ। यो आमा को आधारमा तान्नु निशान लागि उपाय -। पहिले प्रयोग को एक महिना पछि सजिलै देखिने छन् जो कार्यहरू सर्वोत्तम परिणाम एक2हुनुपर्छ एक उपाय तयार गर्न - न्यानो उबला पानी एउटा सानो राशि मा भंग purified आमा को4ग्राम र कुनै पनि शरीर लोशन 100 ग्राम संग मिश्रण। त्यहाँ तपाईं peculiar बास्ना आमा हटाउन र पनि छाला सुधार गर्न मद्दत गर्नेछ जो यस्तो Rosemary रूपमा कुनै पनि आवश्यक तेल को केही थोपाहरु, थप्न सक्नुहुन्छ। जसको परिणामस्वरूप मिश्रण एक फ्रिज मा भण्डारण गर्नुपर्छ। एक हप्ता3पटक - रोकथाम लागि आमा2उत्पादन लागू गर्न पर्याप्त छ। तर अवस्थित तान्नु निशान सामना गर्न, यो मसाज समस्या क्षेत्रमा संग संयोजन, अधिमानतः न्यानो स्नान र एक peeling प्रक्रिया अन्तर्गत छाला गश्त पछि, एक दिन दुई पटक यो लागू गर्न मनमोहक छ। तपाईं यो एलर्जी छाला प्रतिक्रिया कारण छैन पक्का गर्न आवश्यक यस नुस्खा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अघि। यो आमा तर लागि कलाई को भित्र लागू गर्नुपर्छ। 1 भित्र भने -2घण्टा दाह, खुजली, राता कारण छैन, यो गधा, छाती, जांघों र अन्य समस्या क्षेत्रहरूमा तान्नु निशान मा प्रयोग गर्न सुरक्षित छ मतलब । खींच को Peeling तान्नु निशान लागि एउटा उत्कृष्ट घर उपाय - पानी उपचार समयमा हरेक रात प्रदर्शन गर्न सकिन्छ जो एक साफ, प्रयोग peeling। धेरै विधि सफ़ाई:2को एक अनुपात मा वनस्पति तेल (जैतून, नरिवल, बदाम वा अन्य।) र मह संग जमीन कफी जडान: 1:। 1 मिश्रण राम्ररी समुद्र नुन र कुकिंग तेल को बराबर भागमा मिक्स। एक ब्लेंडर 1 avocado मा पिस्नु, कस्मेटिक माटो र दलिया र 1 चम्मच गहुँ रोगाणु तेल को2चमचा थप्न। 1 चम्मच कटा सुकेका कागति बोक्रा, सुन्तला वा वनस्पति तेल को नै राशि संग मिश्रित अंगुर दाख। तान्नु निशान लागि उपाय - तेल घरेलू साफ, मास्क, वा समस्या क्षेत्रमा लागि निको एक मिश्रण एक घटक रूपमा प्रयोग, शुद्ध तेल Rubbing - यो सबै, असल छाला कक्षहरू बहाल यसको बल र लोच वृद्धि गर्न मदत गर्छ। तेल प्रयोग गरेर यस्तो झुनझुनी र vibratsiya.
मेरो पोशाक हिप हप
कपडे शैली हिप-हप फिर्ता 70s मा उत्पन्न, र आफ्नो जन्म ठाउ भनेर समय संगीत भनिन्छ Rap लागि लोकप्रियता प्राप्त गर्न थियो जो अफ्रिकी-अमेरिकी न्यूयोर्क क्षेत्र, हुन मानिन्छ छन्। र्याप कलाकार बस हिप वृद्ध भाइले देखि गोली जस्तै धोक्रे लुगा लगाएका गर्ने ज्यादातर गाढा-skinned किशोरीहरूको थिए। तिनीहरूले भीषण आकार को छाडा राज बस्त्र लगाउनु लगाएका किनभने हामीलाई colonies मा कैदीहरूलाई को परम्परागत बागे, रूप पोशाक थुप्रै एसोसिएट हिप-हप शैली। वस्त्र हिप-हप वस्त्र हिप-हप कार्य पूरा स्वतन्त्रता समावेश, त्यसैले यो शैली जग, अलिकति धोक्रे लुगा बस छाडा छ। हिप-हप को शैली मा सबैभन्दा विशिष्ट लुगा सहज Sweatshirts, टी-शर्ट, पाठ्यक्रम पुरुषहरु टी-शर्ट कट र, डाकू संग अपरिहार्य Sweatshirts मानिन्छ। हिप-हप को महिला शैली वस्त्र हिप-हप पुरुष र महिला विभाजित छैन। गर्ल्स तिनीहरूलाई पनि अधिक मुक्त र liberated बनाउने, मानिसहरू चुपचाप शर्ट, Sweatshirts र टोपी लागि लगाउने। यो शैली स्वागत awkwardness मा, माथि उल्लेख, तर वाहेक, साधारण र बहु-स्तरित कपडे। हिप-हप, धेरै शर्ट र सख्त शर्ट संग खेल शर्ट र टी-शर्ट संयोजन निडर भई मान्छे मा लुगा को शैली मा girls। हिप-हप-मुक्त र उज्ज्वल को शैली मा Girls, तिनीहरूले साहसी र विमोहक छन्, छक्क र ध्यान आकर्षित गर्न डराएका छैनन्। उहाँको सेक्सी हिप हप केटी शो अंडरवियर को "लुकेका" प्रदर्शन र banal फैलएको पट्टियाँ। र, नरक, यो साँच्चै सुन्दर छ। शैली सबैभन्दा हडताली भागहरु को एक - "पाइप" भनिन्छ जो हिप-हप, को शैली मा प्यान्ट। तिनीहरूले यो सडक शैली मा भनेर धेरै, विशाल र जटिल नृत्य चाल प्रदर्शन गर्न सजिलो हुन्छ। प्यान्ट अलिकति तल lowered गरे हिप-हप लगाउने, र एक ठूलो र अक्सर चमकदार बेल्ट संग कस्नु तिनीहरूलाई सजाउनु। एक नियम, हिप-हप को शैली मा, सामान्यतया थकित lowered कि, साथै प्यान्ट लम्बी शर्ट्स रूपमा, आ "पाइप" प्रतिस्थापन गर्न गर्मी मा। हिप-हप मा महिला शैली पनि सामान को अनिवार्य उपस्थिति implies। अनि तिनीहरूमध्ये मुख्य तिनीहरूले अक्सर एक सीधा visor छ, पक्कै हो हिप-हप या बेसबल टोपी। अन्य कुनै कम फैशन सामान हिप-हप मा महिला - यो wristbands, bandanas, उनको काखमा मा चूडियाँ धेरै र, पाठ्यक्रम, गरगहना:। छल्ले, हार, झुम्का र ठूलो पेंडेंट हिप-हप को शैली मा बाल लागि, यहाँ बालिका अक्सर आफूलाई छोटो braids वा dreadlocks अफ्रिका बनाउन अक्सर छोटो haircuts छनौट र। जूता हिप हप हिप-हप जूता - सबै माथि छ, स्नीकर्स उठेको वा जूता र कुन तिनीहरूले आधुनिक र मूल हो - यो राम्रो। यो एक ठूलो जिब्रो र एक मोटी रंग laces संग बाक्लो soles संग लोकप्रिय जूता छलफल। तर originality को खोज मा यहाँ कुञ्जी बिन्दु यो पक्कै पनि नाच हुनेछ किनभने हिप-हप को शैली सान्त्वना जूता, सहज हुनुपर्छ छ कि भूल हुँदैन। अधिकतम naturalness र यो शैली मा कम सबैभन्दा महंगा कदर गर्दै - आवश्यक पूर्णतया हिप-हप को फैशन उपयुक्त छैन: हिप-हप संग अनुपालन एक महत्त्वपूर्ण नियम सुझाव।
सारा संसारले प्यान्ट पुरुष लुगा विशेष रूप छैनन् र हरेक स्त्रीको मा ठूलो हेर्न सक्छन् भनेर सिकेका अद्वितीय कोको Chanel फैशन धन्यवाद। आज यो सवार एक विस्तृत विविधता र जूता को एक किसिम संग संयोजन मा थकित सकिन्छ कि छैन hung तंग प्यान्ट छ आधुनिक स्त्रीको दराज त्यो कल्पना गर्न गाह्रो छ। को दराज मा साँघुरो ट्राउजर हुन!
प्रारम्भिक गर्भावस्था मा स्वभाविक गर्भपात
गर्भपतन गर्भावस्था को 20 सप्ताह पहिले स्वभाविक abortions र भ्रूण झिल्ली भनिन्छ। निस्सन्देह, गर्भपात गर्भवती महिला लागि विपत्ति देखिन्छ, तर धेरै प्रारम्भिक गर्भपात समय त्यो भूल छैन - यो सामान्यतया भ्रूण को जीवन संग गर्भावस्था, कुनै भ्रूण malformations वा असंगत विकास। गर्भपतन आफैमा एक महिला गरेको शरीर गैर-व्यवहार्य fetuses छुटकारा हुन्छ। यो प्रदान छैन दुनिया बचत गर्न गर्भावस्था को 12 सप्ताह गर्न यो उपचार, प्रारम्भिक गर्भावस्था मा गर्भपात सुरु यदि किनभने। तर अक्सर एक महिलाले गर्भावस्था राख्न चाहन्छ र उपचार मा जोर। यस मामला मा, यो जन्म दोष वा आनुवंशिक दोष र उपचार गर्ने सल्लाह दिन्छन् संग एक बच्चा भएको संभव जोखिम बारे चेतावनी गर्न आवश्यक छ। र सम्झना गर्भपतन को संकेत संग (10 दिन भित्र, नियन्त्रण संग भ्रूण वृद्धि रोकिँदै7सप्ताह पछि कुनै भ्रूण, अमेरिकामा gestation को 7-9 सप्ताह मा कुनै हृदय दर र भ्रूण आन्दोलनहरु) एक चिकित्सा गर्भपतन देखाउँछ। गर्भपात को खतरा खतरामा पार्ने गर्भपात को अमेरिकी (को गर्भाशय को segmental कमी पर्खाल) मा diagnosed सबैभन्दा अवस्थामा, र सम्म गर्भपतन पुगेको छैन। यो क्लिनिक महिला र uterine contractions मा progesterone कमी संग सम्बन्धित र उपयुक्त उपचार पछि दूर जान्छ छ। चिकित्सकीय, गर्भपात को खतरा आक्रान्त बिना, यो पेट मा दुखाइ द्वारा प्रकट भएको छ। यसरी विभिन्न तीव्रता देखा spotting, गर्भपात अक्सर थाले र भ्रूण को मृत्यु अन्त्य जो, पीडा intensifies, यो ग्रीवा को cervix को नहर र घाँटी नै छोटा expands। भ्रूण को स्वयंसमर्थता राख्छ, र समय बढ्न छैन detachment को साइट मा bruising र बन्द peeled खोल जारी कि 1/3 भन्दा कम - अल्ट्रासाउंड मा ovum को झिल्ली को एक आंशिक detachment प्रकट गर्नुभयो। Uterine contractions अब segmental छन् र गर्भाशय को पर्खाल को एक ठूलो भाग कब्जा र fertilized अन्डा deforms सक्छ। गर्भपात को समय सुहाउँदो उपचार रोकियो, तर यो समस्या हर्मोनल असंतुलन मा, र फल मात्र छ सम्भव छ, र एक गर्भावस्था कायम गर्दा जन्म दोष एक जोखिम, त्यहाँ छ सकिन्छ भने। यो गर्भावस्था कायम थियो भने त्यसैले, गर्भावस्था को 14 सप्ताह सम्म 12 र माथि भ्रूण मा chromosomal असामान्यताबाट लागि अधिक जीव रसायन जाँच परीक्षण नियुक्त। पछि, यी परीक्षण सूचनात्मक छैनन्। पाठ्यक्रम एक गर्भपात नियमको रूपमा, यो ovum बढी आधा भन्दा व्यास लागि खाल peeling, कुनै मुटुको धड्कन, यो भ्रूण को कुनै आन्दोलन, छोटो cervix र ग्रीवा नहर खुला छ, निर्दय वा serous छुट्टी छन् विशेष गरी भने, contraindicated छ, रोकियो र गर्न सकिँदैन , लगातार uterine cramping। एक प्रारम्भिक गर्भावस्था मा गर्भपात र यसको परिणाम प्रारम्भिक गर्भावस्था मा एउटा अपूर्ण गर्भपात को amniotic तरल पदार्थ जन्म नहर खुला, भ्रूण वा भ्रूण जन्म छ, उत्प्रेरित, तर thereof को गर्भाशय amniotic झिल्ली वा भाग रहिरहन्छ भन्ने तथ्यलाई भरेको छ। अपूर्ण गर्भपात अल्ट्रासाउंड मा diagnosed र खाल हटाउन सल्लाह दिन्छन्:। रूढिवादी (गर्भाशय एजेन्ट कम), वा uterine गुहा scraping प्रारम्भिक गर्भावस्था मा एक पूर्ण गर्भपात को गर्भाशय र भ्रूण को पूर्ण हटान भरेको, र यसको खाल को सबै छ। सामान्यतया पूर्ण गर्भपतन गर्भाशय ठेके नै वा दबाइ पछि गर्भाशय को संक्रमण रोक्न लागि जीवाणुरोधी एजेन्ट प्रशासित आवश्यक छ। तपाईं घरमा भन्दा एक अस्पतालमा मा प्रारम्भिक चरणमा एक गर्भपात थियो भने, तपाईं गर्भाशय भ्रूण र यसको झिल्ली को भाग रहन गर्दैन सुनिश्चित गर्न अल्ट्रासाउंड परीक्षा माध्यम पर्छ। पहिलो प्रारम्भिक गर्भावस्था मा एक गर्भपात थियो भने पछि pregnancies लागि परिणामहरू जरूरी नकारात्मक छैनन्। बस आनुवांशिकता द्वारा जाँच मशाल संक्रमण लागि परीक्षण र छ महिना लागि गर्भावस्था नगर्न गर्नुपर्छ। तर एक प्रारम्भिक गर्भावस्था मा दोस्रो गर्भपात, या बुरा थियो भने - एक महिला गरेको मामला, प्रारम्भिक चरणमा गर्भपात को भाग, यो आवश्यक छ छैन मात्र माथि परीक्षा को, एक स्त्रीरोग विशेषज्ञ द्वारा परीक्षा, चिकित्सक, एन्डोक्राइनोलजस्ट, इम्युनोलोजस्ट। एक महिला प्रारम्भिक गर्भावस्था मा बानी गर्भपात diagnosed भने, रोगी अधिक पछि गर्भावस्था बढ्न महिला को आधा भन्दा, यो स्त्रीरोग विशेषज्ञ मा चिकित्सा पर्यवेक्षण अन्तर्गत छ। प्रारम्भिक गर्भावस्था मा गर्भपात को रोकथाम: शारीरिक र मानसिक तनाव जोगिन, तुरुन्त संक्रमण स्त्रीरोग विशेषज्ञ एक गर्भपतन छ छैन सिफारिस, सबै आवश्यक परीक्षण पारित गर्न ।
CrossFit: प्रशिक्षण कार्यक्रम
CrossFit Workouts ग्रेग Glassman गरेर XX शताब्दीका को 80s मा "आविष्कार" थिए। विचार मात्र एक स्वस्थ जीवन शैली को प्रशंसक गर्न मन आए, तर पनि सैन्य र प्रहरी संरचना। के यति लोकप्रिय साबित भएको छ?